यि हुन नाम चलेका नक्कली डाक्टरहरु – YesKathmandu.com
नक्कली चिकित्सकविरुद्ध अपरेसन चलाएको प्रहरीले तराईका जिल्लाबाट एकैदिन दुई दर्जनभन्दा धेरै चिकित्सक पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले तराईका पर्सा, मोरङ, चितवन, झापालगायतका जिल्लामा अपरेसन चलाएर दुई दर्जनभन्दा बढी नक्कली चिकित्सक पक्राउ गरेको हो ।
विराटनगरका नाम चलेका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू नै नक्कली भएको रहस्य खुलेको छ । शुक्रबार विराटनगरका तीनजना चर्चित चिकित्सक पक्राउ परेपछि यो रहस्य खुलेको हो ।
सिआइबी टोलीले विराटनगरको लाइफगार्ड अस्पतालबाट फिजिसियन डा. जावेद अख्तर, कोसी अञ्चल अस्पतालका पूर्व वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जयकुमार दास र निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका डा. अमिर कलामलाई पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीले बताए ।
यसअघि कोसी अञ्चल अस्पतालबाट तुलसीकुमार महतो र गोल्डेन अस्पतालबाट कमरुल हक पक्राउ परेका थिए । विराटनगरको गोल्डेन, लाइफगार्ड निजीस्तरका नाम चलेका अस्पताल हुन् । कोसी क्षेत्रीयस्तरको सरकारी अस्पताल हो ।
सेतो कोट लगाउने चिकित्सकसँग कसरी भरोसा गरुँ ?
प्रहरीबिरुद्ध मानवअधिकार आयोगमा जाने गायिका रेखा शाहको चेतावनी, अदालतबाट सफाई
यौन सम्बन्ध लुकाउन भाइको हत्या गरेकी प्रियंकाद्वारा प्रहरी चौकीमै आत्महत्या
टीकापुर घटनाका घाइते हवल्दारको मृत्यु
गुन्डाद्धार हत्या गरिएका मानन्धरकी पत्नीले गरिन बिष सेवन
वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालभित्रै गोली चल्यो, कर्मचारी र प्रहरीसहित तीन घाइते